ဟက္ကာ့ လက်ကိုဆွဲ — MYSTERY ZILLION
January 2010 edited February 2010 in Book Sale
Size - 9.09 MB
.........................................The Hacker’s Underground Handbook ကို ဘာသာပြန်ထားတာပါ။
သိ၍ တတ်၍ ပြန်ခြင်းမဟုတ်၊ မသိ၍ မတတ်၍ ပြူးပြဲဖတ်ရှုချိန်၀ယ်၊ မမှတ်၍ မမိ၍ မြန်မာလို ရေးမှတ်ထားသည်များအား၊ ဖြတ်၍ တိ၍ Cut သင့်သည်ကို Cut၊ ထပ်၍ ကြည့်၍ Add သင့်သည်ကို Add၊ ဟတ်၍ ဟိ၍ (ဟယ်… ဟုတ်သေးပါဘူး။ ကာရန်မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး။ ရိုးရိုးပဲရေးတော့မယ်။) အဲဒီလိုပေါ့ဗျာ၊ မြန်မာလိုအကြမ်းမှတ်ထားတာတွေကို ဘာသာပြန်တယ်ဖြစ်အောင် နည်းနည်းထပ်လုပ်ပြီး ဟက္ကင်းကို စိတ်၀င်စားကြတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် ဖတ်ရအဆင်ပြေအောင် မြန်မာလိုမှတ်စုအကြမ်း ၀ိုင်းရေးပေးခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း…။
အဲဒီမူရင်းစာအုပ်ကို MMSO က ရခဲ့တာပါ။ MMSO မှာလည်း အကိုတစ်ယောက် ပြန်နေတာ ရှိပါတယ်။ အစက ကျွန်တော်လည်း သူ့ဟာကို စောင့်ဖတ်နေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မအောင့်နိုင်တော့လို့....:D ကျွန်တော့်ဘာသာ ဖတ်ကြည့်ရင်း မြန်မာလို မှတ်ထားတာတွေကို PDF လုပ်တင်ပေးတာပါ။ အခု လင့်ခ်မှာ အခန်း -6အထိ ပါပါတယ်။
အခန်း ၇ နဲ့ နောက်ပိုင်းကို ဖတ်နေတုန်းပါ။ ပြီးရင်လည်း တစ်စုတစ်စည်းတည်းတင်ပေးပါ့မယ်။
ဒါက MMSO က ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Link ပါ။
အခုလိုမျှေ၀ပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် :d
မြန်မာလိုဆိုတော့ ကောင်းကောင်း လေ့လာလို့ ပိုပြီးလွယ်သွားတာပေါ့
Great Job !! khit100 .. Keep it up ..
sites google မှာ တင်ထားသမျှ အကုန် ဒေါင်းသွားဘီ ခင်ဗျာ..
khit100 . ကျေးဇူးပါဘဲ ခင်ဗျာ...
Size - 3.45 MB
တစ်အုပ်လုံး ပြီးပါပြီ။ အခုလင့်ခ်က တစ်အုပ်လုံး လင့်ခ်ပါ။ ဒါပေမယ့် Chapter Nine ကို ကျွန်တော့် ဉာဏ်လေးနဲ့ လိုက်မမှီလို့ ပြန်ဖို့ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ တောင်းပန်ပါတယ်။ Chapter Nine တစ်ခန်းကို မူရင်းအတိုင်းသာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။